I panel ne front futhi bakhulise ikhamera bese eziseceleni for BlackBerry Playbook — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Izesekeli nezingxenye zokungcebeleka zeBlackBerry‎ → ‎Izesekeli kanye izingxenye ezisele for BlackBerry Playbook ‎ → ‎
I panel ne front futhi bakhulise ikhamera bese eziseceleni for BlackBerry Playbook
I main kanye front ikhamera, LED-display, inzwaduze / ukukhanya, izinkinobho phezulu — zonke on eyodwa chip encane. It — lwangempela esikhululekile okuyingxenye, ukukhiqizwa BlackBerry, oqinisekisa ikhwalithi kanye isikhathi eside ekuphileni.
Isixhumi ekamelweni main
Ikhamera main of 5 MP, T5 Ikhamera BlackBerry
Isixhumi front ikhamera
Front ikhamera 3 MP, T24 Ikhamera BlackBerry
Inzwa yokulinganisa / kukhanyisa
Izinkinobho On / Off, Volume Up,-Google Play / Misa okwesikhashana, Volume Down
Uma ungenawo omunye ezifakiwe, ikhambi elingcono kakhulu ukuba esikhundleni salo chip. It — lwangempela esikhululekile okuyingxenye, ukukhiqizwa BlackBerry, oqinisekisa ikhwalithi kanye isikhathi eside ekuphileni.
Front ikhamera isetshenziswa zevidiyo, njengoba 'isibuko' ngoba kokuqoshwa "selfie". I — main photo kanye video. Uma uhlangabezana nezinkinga nge ikhamera yakho (it ayikwazi kwakuhlanganisa nhlobo, isithombe kungaba black ngokuphelele noma ukukhubazeka) kufanele zishintshwe, le ngxenye.
Sicela uqaphele, uma kwenzeka ukwehluleka umsebenzi womunye kwamakamelo Playbook (screen "black", noma "screen ezimthende"), ehlukile replacement ikhamera cishe ngeke ukuxazulula inkinga. Sincoma ukuthi ushintshe kuzo zonke izingxenye emhlanganweni.
Lokhu izingxenye nazo efakwe LED-inkomba (smartphone BlackBerry isetshenziswa ukubonisa izaziso), ukusondela izinzwa / illuminance nesitsha eliphezulu inkinobho. Lokhu lula ikhambi nezinkinga ukwephulwa isixwayiso imisebenzi LED, futhi impendulo idivayisi ukuze izibani kuma.
Qaphela ukuthi lezi zitho ezinguqulweni ezahlukahlukene Playbook (Wi-Fi, 3G / 4G) ahambisanayo. Uma unemibuzo, sicela uxhumane uchwepheshe wethu.
The esikhundleni lokhu chip kunzima, ngakho-ke sincoma ukuba balungise Playbook ukuxhumana ongoti bethu.
I panel ne front futhi bakhulise ikhamera bese eziseceleni for BlackBerry Playbook, Ngaphandle umbala, ngoba 3G / 4G-version PBCAMPANEL-3G ●
I panel ne front futhi bakhulise ikhamera bese eziseceleni for BlackBerry Playbook, Ngaphandle umbala, i-Wi-Fi-version PBCAMPANEL-WIFI ●
Ngaphandle umbala, ngoba 3G / 4G-version PBCAMPANEL-3G
Ngaphandle umbala, i-Wi-Fi-version PBCAMPANEL-WIFI